कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीम कूकले गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको आइफोन एक्सभन्दा ठूलो स्क्रिन भएको आइफोन एक्सएस म्याक्स सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई अमेरिकी बजारमा ११ सय डलर (करिब रु. १ लाख २६ हजार) रहेको छ । यसको मूल्य आइफोन एक्सभन्दा सय डलर बढी रहेको छ ।
म्याक्स मोडेल आइफोन ८ प्लसकै हाराहारीको छ तर स्क्रीनको आकार केही ठूलो रहेको छ । कम्पनीका अनुसार उपभोक्ताले आइफोनका स्क्रीनहरु साना भएकाले फोटो र भिडियो खिच्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गर्दै आएकाले यस फोनमा सो गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको छ।
काठमाडौँ । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले उल्लेखनीय परिवर्तनसहित एप्पलका लागि नयाँ अपरेटिङ सिस्टम आईओएस१३ केही विशेष फिचरसहित ल्याएको छ । कम्पनीले आईओएस १३ बेटा १ भर्जन गत सोमवार सार्वजनिक गरेको
चीनमा आइफोन बहिष्कार गरी हुवावेको फोन किन्न कर्मचारीमाथि दबाब
चीन । अमेरिका तथा अन्य केही मुलुकमा दबाब खेपिरहेको हुवावेलाई चिनियाँ कम्पनीहरुले समर्थन गरिरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई आइफोन खरीद नगरी हुवावेको फोन खरीद गरे धेरै छुट दिने
आइफोन एक्सका धनी सावधान ! डिलिट भइसकेको फोटो चोर्दै छन् ह्याकरहरु
काठमाडौं । आइफोन एक्समा एउटा बग (सफ्टवेयरसम्बन्धी समस्या जसले गलत नतिजा दिन्छ) देखिएको छ । यसको माध्यमले ह्याकरहरुले तपाईंको तस्वीर चोरी गर्न सक्छन् । आइफोनको यो बगबाट ह्याकरले युजरका डिलिट भइसकेका
सिक्काले भरिएको बाथटब लिएर आइफोन किन्न पुगे एक युवक
काठमाडौं । एप्पलले केही समयअघि विश्वकै महँगो आइफोन एक्सएस र एक्सएस म्याक्स सार्वजनिक गरेको थियो । १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने यो आइफोन बेच्न कुन चाहिँ पसले खुसी नहोला